Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) - Hello Sayarwon
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း)
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း သည် တကိုယ်လုံးတွင်ရှိသော သေးငယ်သောသွေးကြောများတွင် သွေးခဲမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသွေးခဲများသည် သွေးစီးဆင်းမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ ပိတ်ဆို့စေခြင်းဖြစ်စေကာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အရေးပါသော အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြင့် သွေးထဲတွင်ရှိသော သွေးမွှားဥများနှင့် သွေးခဲစေသောအရာများ ကုန်ဆုံးသွားသည်။ သွေးမွှားဥများဆိုသည်မှာ သွေးကြောများပြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက အနာကျက်စေရန် ထိုနေရာတွင် လာရောက်စုဝေးပြီး သွေးတိတ်စေနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ သွေးခဲစေသော အရာများကိုလည်း ပုံမှန်သွေးခဲမှုဖြစ်စဉ်များတွင် လိုအပ်ပါသည်။
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်လျှင် ထိုအရာများကုန်ဆုံးသွားခြင်းကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်၏ အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် သွေးထွက်လာပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်၏ အတွင်းတွင်သွေးထွက်ခြင်းသည် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများတွင် သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ အပြင်တွင်သွေးထွက်ခြင်းသည် အရေပြားအောက်နှင့် ချွဲလွှာများတွင်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ချွဲလွှာဟူသည် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ နှင့် နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်စသည့် အခေါင်းပါသော အရာများကို ကာရံထားသော အလွှာဖြစ်သည်။)
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း သည်ခန္ဓာကိုယ်တွင် သွေးလွန်ကာ အသက်အန ္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း သည်မည်သည့်အရွယ်တွင်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေရာ အတော်များများမှသွေးထွက်ခြင်းသည် တွေ့ရများသော ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပြီး ချွဲလွှာများတွင်သွေးထွက်ခြင်း နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ အပြင်တွင်သွေးထွက်ခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်၏ အတွင်း ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများတွင် သွေးထွက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စအို၊ မိန်းမကိုယ်မှ သွေးထွက်ခြင်း
အရေပြားပေါ်တွင် အနီစက်များထွက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ကင်ဆာရောဂါသည်များ တွင်လည်း သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းသည် တဖြေးဖြေးချင်းဖြစ်ကာ သွေးပြန်ကြောများတွင် သွေးခဲခြင်းပိုဖြစ်ပြီး သွေးထွက်လွန်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန်ထံပြသပါ။
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်သည် အလွန်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုရောဂါဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိခြင်း (ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်မိခြင်းနှင့် ကွဲကြေ ဒဏ်ရာများ)၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ကင်ဆာရောဂါများသည် သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ရန် အားပေးသော အချက်များဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်ဖြစ်သော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သွေးလန့်ပြီး ရုတ်တရက် သွေးလည်ပတ်မှုရပ်သွားခြင်းကြောင့်လည်း သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း ကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အကြောင်းများစွာမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ကလေးပျက်ကျခြင်း(သနေ္ဓအပိုင်းမစများ သားအိမ်ထဲတွင် ကျန်ခဲ့ခြင်း)
ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးများ အသုံးပြုမှု
သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ မှို သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ သွေးထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်း
ကင်ဆာရောဂါအချို့ (အထူးသဖြင့် လူကီးမီးယား သွေးကင်ဆာရောဂါ)
တစ်သျူးများကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်မိခြင်း (ခေါင်းကို ထိခိုက်မိခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မီးလောင်နာများ)
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းကို သွေးထဲရှိ သွေးမွှားဥများ၊ သွေးခဲစေသော အရာများနှင့် သွေးထဲတွင်ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားသော အရာများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုစစ်ဆေးမှုများသည် စံသတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးမှုများ မဟုတ်ပါ။
အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုများသည် ဆရာဝန်က သင့်တွင် သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်နေကြောင်း သံသယဖြစ်လျှင် ပြုလုပ်မည့် သွေးစစ်မှုများဖြစ်ပါသည်။
Complete blood cell count (cbc) fromablood smear
Complete blood cell count (cbc) from sample
Disseminated Intravascular Coagulation (သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း ကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို သိရှိပြီးကုသခြင်းသည် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သွေးခဲခြင်းကို ကုသရန်အတွက် Heparin အမည်ရှိ ဆေးဖြင့်ကုခြင်းဖြင့် သွေးခဲခြင်းကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်စေသည်။
သို့သော် သင့်တွင် သွေးမွှားဥများလွန်စွာလျော့နည်းနေခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်နေခြင်းဖြစ်ပါက Heparin သည် အသုံးမဝင်ပါ။
ရုတ်တရက် သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်သူများသည် ဆေးရုံတက်ပြီး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ကုသမှုခံယူရန် လိုပါသည်။
အခြားသော ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကုသမှုများမှာ-
သွေးထွက်လွန်နေလျှင် သွေးခဲစေသော အရာများကို သွေးထဲတွင် ပြန်လည်ဖြည့်ပေးသည့်အနေဖြင့် သွေးရည်ကြည်သွင်းခြင်း
သွေးခဲလွန်းနေလျှင် သွေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် သွေးကျဲဆေး (Heparin)ပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်း ဖြစ်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
သင့်တွင် သွေးကြောတွင်း သွေးခဲမှုပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ပါက သင်ဆေးခန်းလာပြရမည့် အချိန်ဇယားနှင့် သွေးစစ်ရန်လိုအပ်သည်များကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာအောင်မေးမြန်းပါ။
သွေးစစ်ခြင်းဖြင့် သင့်သွေးထဲတွင် သွေးခဲမှုပမာဏကို သိရှိနိုင်ပြီး သွေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် သွေးခဲကြီးမလာစေရန် သွေးကျဲဆေးများ သောက်ရန်လိုအပ်လျှင် သောက်နိုင်သည်။ သွေးကျဲဆေးများသောက်နေပါက သင့်ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။
ထိုဆေးများသည် သွေးကို အလွန်ကျဲသွားစေပြီး သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ချော်လဲပြီး ၊ ဒဏ်ရာရပြီး ချိန်တွင် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်းတို့ဖြစ်ခြင်းသည် သွေးကျဲခြင်း၏ လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သင်သည် တိုင်းရင်ဆေးများ၊ အားဖြည့်ဆေးများ နှင့် ဗီတာမင်ဆေးများ စသည့် ဆေးဆိုင်တွင် ဝယ်ကူနိုင်ေသော ဆေးများကို မသောက်မီ ဆရာဝန်အား အရင်မေးမြန်း သင့်သည်။ ထိုဆေးများသည် သွေးခဲခြင်းကို နည်းစေခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။
ဥပမာ – Aspirin, Ibuprofen စသည့်ဆေးများသည် သွေးအလွန်ကျဲစေကာ သွေးထွက်နိုင်ချေများစေပါသည်။
သင်သည် ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ရမည်ဆိုပါက ခွဲစိတ်နေစဉ်နှင့် ခွဲပြီးချိန်တွင် သွေးထွက်လွန်ခြင်း မဖြစ်အောင် ဆရာဝန်က ဆေးများကို ညှိပေးပါလိမ့်မည်။ သွားနှင့် ပက်သက်သော ကုသမှုများသည်လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သွားနှင့် ပက်သက်သော ကုသများသည် အကြီးစားခွဲစိတ်မှုများထက်ပိုပြီး သွေးလွန်နိုင်ချေနည်းပါသည်။
Disseminated intravascular coagulation (DIC). https://medlineplus.gov/ency/article/000573.htm. Accessed February 10, 2017.
What Is Disseminated Intravascular Coagulation? https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/dic. Accessed February 10, 2017.
Disseminated Intravascular Coagulation (DIC). http://www.healthline.com/health/disseminated-intravascular-coagulation-dic#Overview1. Accessed February 10, 2017.